ဆက်ဆီကိုယ်လုံးလေးနဲ့ ညို့ငင်အားပြင်းပြင်း ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော်ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Shwe Yoe
မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော် က တော့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ချစ်စရာ အပြုံးလေး တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိ တဲ့ တက်သစ် မော်ဒယ်လ် မလေး တစ်ယောက် ဖြစ် ပါတယ် နော်..။
ဖြူသိင်္ဂီကျော် ကတော့ မော်ဒယ်လ် လောကထဲ ကို ဝင်ရောက်တာ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အားပေးဝန်းရံ မှုများ ကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင်လာ တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါ တယ်. .။ ပုရိသတွေ ရဲ့ အားပေးမှု အများဆုံး ရရှိထား တဲ့ သူမက တော့ အွန်လိုင်း မီဒီယာ ပေါ်မှာ လည်း နာမည် ရထားတဲ့သူ တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။
အထာကျကျ အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့ အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေး ဖြစ်တာကြောင့် လက်ရှိ ဖေ့ဘွတ်စာ မျက်နှာ မှာ ရေပန်းစား လူကြိုက်များ ကာ ယောက်ျားလေး ပရိတ်သတ် အများစုက ဝန်းရံနေ ကြတာ လည်းဖြစ်ပါ တယ်. .။သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေ ကို လူမှုကွန် ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ် တွင် အများဆုံး တင်လေ့ ရှိ တာတွေ့ရ ပါ တယ်..။
မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော် ကတော့ ပုံလေးတွေ တိုင်းမှာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိနေပြီး လန်းလွန်း နေတာ လည်းဖြစ်ပါ တယ်..။ သူမက တော့ အထာကျကျ ရိုက်ထား တဲ့ ပုံလေး ကို ‘ ကျောင်းတွေ မဖွင့်သေး လို့ လည်နေ သူလေး ‘စာသားလေး နဲ့ အတူ ဖော်ပြ လာတာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ ဖြူသိင်္ဂကျော် ရဲ့ အလှ ပုံရိပ် လေးတွေ ကို ပရိတ် သတ်ကြီး အတွက် တဆင့် မျှ ဝေ ပေးလိုက်တယ် နော်…။
အထာကကြ အမိုကျစား ပုံတှေ နဲ့ ညို့ အားပွငျးပွငျး ဆှဲဆောငျနိုငျ သူလေး ဖွဈတာကွောငျ့ လကျရှိ ဖဘှေ့တျစာ မကျြနှာ မှာ ရပေနျးစား လူကွိုကျမြား ကာ ယောကျြားလေး ပရိတျသတျ အမြားစုက ဝနျးရံနေ ကွတာ လညျးဖွဈပါ တယျ..။သူမရဲ့ အမိုကျစား ပုံရိပျတှေ ကို လူမှုကှနျ ယကျ ဖဘှေ့တျပျေါ တှငျ အမြားဆုံး တငျလေ့ ရှိ တာတှရေ့ ပါ တယျ..။
မျောဒယျလျ ဖွူသိင်ျဂကြျော ကတော့ ပုံလေးတှေ တိုငျးမှာ ဆှဲဆောငျမှု ရှိနပွေီး လနျးလှနျး နတော လညျးဖွဈပါ တယျ..။ သူမက တော့ အထာကကြ ရိုကျထား တဲ့ ပုံလေး ကို ‘ ကြောငျးတှေ မဖှငျ့သေး လို့ လညျနေ သူလေး ‘စာသားလေး နဲ့ အတူ ဖျောပွ လာတာပဲ ဖွဈပါ တယျ..။ ဖွူသိင်ျဂကြျော ရဲ့ အလှ ပုံရိပျ လေးတှေ ကို ပရိတျ သတျကွီး အတှကျ တဆငျ့ မြှ ဝေ ပေးလိုကျတယျ နျော…။
အခုမှ ဖော့ဘုတ်ပြန်သုံးပြီး ချစ်ရတဲ့ပရိသတ်တွေကို လွမ်းတဲ့အကြောင်း ပြောလာတဲ့ မင်းသမီး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
မြင်ရသူတိုင်း ကြွေဆင်းသွားလောက်အောင် မိမိုက်နေတဲ့ မျက်ဝန်း ရဲ့ ပုံရိပ်များ
အဖြူရောင် ဂါဝန်လေးနဲ့ ဆယ်ကျော်သက်လို့ လန်းလွန်းနေတဲ့ မမသင်ဇာ ရဲ့ ပုံများ